Iimpawu zodiac ngeminyaka? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Iimpawu zeZodiac ngonyaka?
Ngaba waphinda qho kwiminyaka 12, umzekelo 1987 konyaka umvundla + 12, 1999 njengoko umvundla, umvundla dragon 88, inyoka 89, 90 ihashe, 91 yebhokhwe, inkawu 92, umqhagi 93, inja 94, svinya95 ibuzi 96, inkunzi 97, amahlosi 98 kwaye kwakhona umvundla we-99.
Ewe, uninzi alwazi - ngonyaka awazalwa ngawo. Kodwa ngokobuqu, yamkelwe nje kwangoko uphawu lwe-zodiac. Ngokuqinisekileyo abantu abanjalo baya kuba nomdla kumfanekiso olandelayo.Ngaphezulu, kuwo unokufumana into kunye nombala wakho.
Izibonakaliso ze-Zodiac kwikhalenda yempuma ngonyaka wokuzalwa.
I-12 yabo yonke, umyalelo kunye nokunye okunye kunokubonwa kule tafile:
Inqanaba 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
Bull 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
I-Tiger 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
Ikati 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023 XNUMX XNUMX
Inyoka 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
Ihashe 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
Ibhokhwe ngo-1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
Monkey 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028 XNUMX
Inja 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
Ingulube 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031
Ngokwenqaku lokwenza i-horoscope, u-Buddha waqokelela izilwanyana, ezilishumi elinambini zeza kuye, wabaxelela ukuba bakhuphisane ngesantya kunye ne-agility, izilwanyana zasasazwa ekugqibeleni ngolu hlobo lulandelayo - irati, wakhwela kwinkunzi yenkomo, kwaye ngaphambi kokutsiba wagxuma waguquka waba ngowokuqala, u-Buddha wamxabisa u-tat wakhe okokuqala, i-horoscope iqala ngomqolo. Ke ixhaphake njalo kwiminyaka elishumi elinambini, elandelayo inkunzi, emva koko inkunzi, inkunzi, umvundla, inamba, inyoka, ihashe, igusha, inkawu, iqhude, inja, ihagu yasendle.
Ukuba sithetha ngeminyaka, ngoko kukho impawu ezinjalo ezilishumi elinesibini. Umqondiso ngamnye uphindaphinda, ngokulandelanayo, kwiminyaka elishumi elinesibini epheleleyo. Kuya kuba nethamsanqa ngakumbi kuloo mntu kunyaka othile, ukuba unyaka omnye (okanye kunoko, phantsi kwalo mqondiso) umntu wazalwa.
Kwaye nantsi itafile apho ungakufumanisa ukuba ngubani owazalwa ngonyaka:
Kukho izilwanyana ezilishumi elinambini kwikhalenda yeChina yeMpuma:
I-Rat ezalwe ngonyaka: 1948 1960 1972 1984 1996 2008
I-Bull ezalwe ngonyaka 1949 1961 1973 1985 1997 2009
I-Tiger ezalwe ngonyaka 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Umlenze, owaziwayo njengoHar, ozalelwa ngonyaka 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Inyoka ezalwe ngonyaka 1940 1952 1964 1976 1988 2012
Inyoka eyazalwa 1941 1953 1965 1977 1989 2013
Ihhashi ezalwe ngonyaka 1942 1954 1966 1978 1990 2014
Inkunzi, kunye neegusha, ezalelwa ngonyaka 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2015
Ikhumba ezalwe ngonyaka 1944 1956 1968 1980 1992 2016
I-Rooster ezalwe ngonyaka 1945 1957 1969 1981 1993 2017
Inja ezalwe ngonyaka 1946 1958 1970 1982 1994 2018
Ingulube, eyaziwa ngokuba yi-Boar, eyazalwa ngonyaka 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2019
Iimpawu ziphinda ziphindwe minyaka yonke elishumi elinambini. Kwikhalenda yaseMpuma, unyaka ngamnye uhambelana nesici kunye nombala:
Ukuze ukwazi uphawu lwakho lwesibonakaliso se-zodiac kunye nomnyaka wokuzalwa, kufuneka uqale ugqibe isilwanyana sakho, kunyaka ozalelwe ngawo ngokwe-horoscope yaseMpuma:
Emva koko, jonga i-horoscope yakho yesibini se-Eastern Horoscope Sign-Zodiac Sign:
Kukho ikhalenda yeNtshona yeenkwenkwezi, ebizwa ngokuba yi-Zodiac kunye neminyaka yokuzalwa ngokwekhalenda yeMpuma. Lawa mahalenda ahlukeneyo kunye nemiqondiso eyahlukileyo.
I-horoscope ye-zodiac yahlulwe yaba ziinyanga ezilishumi elinambini, uphawu ngalunye lunohlobo lwenkanyezi, lujikeleza iplanethi yayo okanye umzimba wasemazulwini kunye nezinto zalo (umoya, amanzi, umhlaba okanye umlilo). I-zodiac horoscope iqala nge-solstice yasentwasahlobo kunye ne-Aries yomqondiso.
Ikhalenda yaseMpuma okanye yaseTshayina ngonyaka wokuzalwa kwakhona iqukethe imijikelezo yeshumi elinambini (imiqondiso). Ngezinye iikhalenda kuthiwa yi-zodiac yaseTshayina ngokufana nekhalenda yeenkwenkwezi zaseNtshona, ezingenakwenyaniso.
Ikhalenda yeTshayina ihlukaniswe ngonyaka, unyaka ngamnye unesilwanyana sawo. Umjikelezo weminyaka elishumi elinesibini ubizwa ngokuba ngamasebe eMhlaba. Unyaka omtsha ngokwekhalenda yempuma iqala ngomhla wesibini wenyanga inyanga emva kweholide yasebusika, ngoko oko kudla ngokuqala ngasekupheleni kukaJanuwari okanye ngoFebruwari. Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo xa ugqiba unyaka wakho wokuzalwa ngokuvumelana ne-horoscope yaseTshayina.
Kulula ukucacisa ukuba isiphi isilwanyana esifana nomnyaka wokuzalwa: okwaneleyo, ugxile kwitafile, ukufaka okanye ukukrazula i-12.
Ukongezelela, kwikhalenda yeTshayina kukhona into efana neZulwini. Lo ngumjikelezo weminyaka elishumi wokutshintsha kwezinto zendalo (izinto): amanzi, umthi, umlilo, umhlaba, isinyithi. Ngamanye amacandelo anombala wayo, ngoko sinomkhuba wokunika igama lombala (unyaka wenja ephuzi, unyaka webhokhwe eluhlaza, njl.). Nangona kuchanekile ukunika igama kungekhona ngombala, kodwa ngento. Ngokomzekelo, abantu abazalwa ngonyaka we-1975 bazalwa ngonyaka weRebhu yeenkuni, ezazalwa ngonyaka we-1990, owazalwa ngonyaka weHome yensimbi, njl njl.
Elinye iqela quot; ulawulo; kwiminyaka emibini ngokulandelana.
Iminyaka ephela kwi-0 okanye 1 (umzekelo, 1960 no-1961) ziphenjelelwa yintsimbi, ehambelana nombala omhlophe okanye wesilivere.
Iminyaka ephela ngo-2 kunye ne-3 ithonyelwa ngamanzi, ehambelana nomnyama kunye nohlaza okwesibhakabhaka.
Iminyaka ephelile i-4 kunye ne-5 ithonyelwa ngumthi, ohambelana nombala oluhlaza.
Iminyaka ephelile i-6 kunye ne-7 yiminyaka yomlilo, ehambelana nobomvu.
Iminyaka ephela ngo-8 kunye ne-9 yiminyaka yomhlaba, ehambelana ne-ocher okanye emdaka.
Itheyibhile engezantsi ibonisa imijikelezo yeminyaka elishumi elinesibini yekhalenda yaseTshayina. Amanzi aboniswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, intsimbi imhlophe, umlilo ubomvu, iinkuni ziluhlaza, nomhlaba uphuzi.
Kodwa ayisiyiyo yonke le nto: kwikhalenda yasempuma, isilwanyana ngasinye sineempawu eziqhubekayo: into yaso yendalo (amanzi, iinkuni, umlilo, umhlaba okanye isinyithi), isikhokelo sayo yenye yamanqaku ekhadinali, iyure yayo eyonwabileyo kunye nemvelaphi yayo yesetyhini okanye eyindoda. Ibhinqa nguYin, ubudoda yiYang.
Iimpawu zeZodiac ngonyaka, iimpawu ezihlekisayo:
Unyaka woMouse (uMdaka)
Unyaka weRbit (iKota)
Unyaka webhokhwe (iigusha)
Unyaka weBhoar (iigogo)
Kukho kuphela izibonakaliso ze-12 zodiac ngonyaka kwaye isibonakaliso ngasinye se-zodiac siphindwa rhoqo emva kweminyaka emibini. Kukholelwa ukuba phantsi kweyiphi impawu yezodiac waza wazalwa, ngoko umnyaka walo mqondiso kufuneka ube yimpumelelo kumntu ophethe lo mqondiso.
Lo akuyena umbuzo wakho malunga nezodiacac. I-Zodiac yimpawu ze-12 unyaka wonke. I-Capricorns, i-Aquarius, njl.
Umbuzo wakho malunga ne-horoscope yaseTshayina.
Kukho iimpawu ze-12, enye yonyaka kunye kwakhona entsha.
Khumbula kulula kakhulu. Nanku unyaka ka-2017 eza-unyaka weRover.
Ke, minyaka le n * iminyaka eli-12 eyahlukileyo, kungekudala okanye kwixa elizayo, iyakuba ngunyaka we Rooster.
Ngo-2005 (2017-12), 2029 (2017 + 12), njl. Kwaye kunjalo nangawo nawuphi na unyaka.
Kwi-horoscope yasempuma, uphawu ngalunye lumele isilwanyana esilawula unyaka wonke. Ukufumanisa ngonyaka umntu awazalwa ngawo, kwanele ukwazi unyaka awazalwa ngawo kwaye ujonge itafile:
Kwakhona, ngokuxhomekeka enyakeni, isilwanyana ngasinye singokunye kwezinto ezihlanu (iinkuni, umlilo, umhlaba, isinyithi kunye namanzi).
Ngokwale tafile ilandelayo, unokugqiba ukuba yeyiphi inqanaba lesilwanyana ngokweminyaka (umthi-luhlaza, amanzi - luhlaza, intsimbi - mhlophe, umhlaba - beige, umlilo-ubomvu):
Itheyibhile ikwabonisa umhla apho unyaka uqala ukusebenza.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,458.